HABABKA WAX KU OOLKA AH EE BOODADA: SHAMPOOS, TALLAALO, BUUFIN IYO KUWO KALE - GURI, GURI
Dhammaan waad ka dili kartaa dulinada! Hababka wax ku oolka ah ee boodada: shampoos, tallaalo, buufin iyo kuwo kale
Haddii boodada laga helo xayawaan, waxaa lagula talinayaa in tallaabooyinka la qaado isla markaaba, tan iyo markaas cayayaanka ayaa dhaawac weyn u geysan kara xayawaanka. Ticks ma aha mid khatar ah, sidaa darteed marka xayawaanka lagu socdo waxaa lagu talinayaa in la ilaaliyo taxaddarrada.
Markaad dooranayso badeecooyinka cayayaanka ugu horreyntii waa lagama maarmaan inay xoogga saaraan habka maaliyadeed, sida joogitaanka qadar badan oo kiimiko ah ayaa kicin kara maqaarka gubashada ama dhameystiraya sumowga jidhka.
Ka hor intaadan iibsan badeecad Waxaa sidoo kale lagu talinayaa in ay akhriso dib u eegista bukaanka.c, macluumaadkani wuxuu kaa caawin doonaa inaad iska ilaaliso dhibaatooyin badan.
Dareemayaasha insecticidal maanta ayaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah qalabka ugu badan ee loo isticmaalo boodada, dalabaadka iyaga oo u sabab ah faa'iidooyinka soo socda:
sahlan isticmaalka - daroogada ayaa lagu dabaqayaa xayawaanka xayawaanka ah, waxayna xoqeen maqaarka, xayawaanku uma baahna inay qubaystaan ​​ama ku buufiyaan aerosol;
kalsoonida - Inta badan wakiilada kiimikada waxay ku siiyaan burburka dhamaystiran ee cayayaanka laba bilood;
helitaanka - Qiimaha celceliska dhaqaaluhu waa ku kala duwan yahay 300 oo roon, awooddu waxay ku filan tahay 2 bilood.
Caawin! Dareemayaasha waxaa loo tixgeliyaa habka ugu fiican ee daaweynta xayawaan horay loo soo qaaday, sheyga aan la maydhin.
Dhibaatooyinka dhibcaha waa sunta iyo saameynta daawada, looma isticmaali karo in lagu daaweeyo xayawaanka qaba cudurka ka yar da'da 2 bilood, iyo sidoo kale bukaanka soo kabashada, nuujinta iyo shakhsiyaadka uurka leh.
Boogaha waxay tixgeliyeen daroogada ugu dhakhsaha badan laga soo bilaabo cayayaanka, waxay hubiyaan in burburinta cayayaanka isla markiiba daaweynta ka dib, saameyntii haraaga waxay socotaa bil gudaheed.
Miisaaniyad la'aan ayaa la tixgeliyaa sunta, daroogada laguma talinayo daaweyn loogu talagalay ardayda, dadka waaweyn waa in la ilaaliyaa si aanay u lumin daroogada.
Badanaa buufin codsaday 20-30 daqiiqo dusha sare ee maqaarkamarka laga reebo xargaha, ka dib markii qalab si taxadar leh looga saaray. Spray ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa hoyga xayawaanka iyo naadiyada gaarka ah.
Shamboo iyo saabuun waxay u ogolaataa wakhti gaaban in laga takhaluso inta badan cayayaankaQalabka wuxuu bixiyaa xayawaanka guriga xayawaanka iyo boodhka.
Shampoo waa lagama-maarmaan marka ay lagama maarmaan tahay in la keeno bisad si muuqaal caadi ah, socodka toddobaadyada waddooyinka, ama nadiifinta eey ka qaadday tuulooyinka ilaa magaalada.
Qalabku wuxuu leeyahay faa'iido darro, waxaa loo tixgelin karaa saameynta maxalliga ah, taasoo keentay in qaar ka mid ah goobaha aan la dhaq-dhaqaaqin, natiijo ahaan dadku waxay si degdeg ah u soo kabtaan.
Sidoo kale waa lagama maarmaan in la xisaabiyo shaambo waa in aan loo isticmaalin xayawaanka yaryar, daciifka ah iyo kuwa duugoobayhaddii ilmo yar oo jilicsan ayaa laga helay waddada, maydhashada fudud ayaa ka cabsiin karta xitaa isaga dila.
Crayon waxaa loo tixgeliyaa in ay tahay mid waxtar badan oo ka soo horjeeda boodada iyo qashinka, waxaa loo isticmaalaa in lagu calaamadeeyo cayayaanka ugu caansan ee cayayaanka; xaaladdan, kalluunku wuxuu sameyn doonaa. Masha ka soo jeeda baranbaro.
Guga si looga hortago waxaa lagula talinayaa in la sameeyo talaalka haradamuddadeeda waa hal bil. Haddii aad qaadato xayawaan hore loo tallaalay guriga, waxaad u baahan tahay inaad ogaato tallaalka la isticmaalay.
Maxaa ka wanaagsan inaad isticmaasho xiraha boodada ama dhibcaha
Xayawaanku waxay saaraan xayawaan ku wareegsan qoorta, waxa ay leedahay saameynta ugu horeysa ee caydhinta. Waa arrin aad muhiim u ah in la tixgeliyo in qalabku muujinayo waxtarka kaliya haddii ay ku habboon tahay daawooyinka kale. Xayawaanka qaarkood oo isku dayaya inay jiidaan ayaa naftooda wax u dhimi kara.
Daboolku wuxuu noqon karaa mid aan fiicnayn xayawaanka waaweyn, cayayaanka ayaa si fudud u dhaqaaqa daboolka. Qalabka waxaa lagula talinayaa in loo isticmaalo sida prophylaxis, iyo sidoo kale isku dhafka shaambo ama dhibcood.
Marka aad dooranayso hab Waxaa lagu talinayaa in ay tixgeliso xayawaanka gaarka ah. Burbur laga keenay tuulada, oo aan la qorsheyneyn in la dhigo jiilaalka banaanka qolka, waxaa lagu daaweyn karaa dhibco. Haddii xayawaanku si joogta ah ugu socdo wadada xiriirka la leh xayawaanka dariiqyada, waxa fiican inaad iibsato qoryaha.
Qalabka fareemka waxaa loo tixgeliyaa inay dhibaato weyn u tahay xayawaanka, waxay u keenaan raaxo weyn xayawaan, waxay khatar gelinayaan, sababtoo ah waxay yihiin sidayaal cudurro kala duwan. Habka wax ku oolka ah ee wax looga qabto iyaga ayaa la tixgeliyaa dhibcood, buufinta, xidhxidhka. Waxaa ugu wanaagsan in la helo dhibaatooyinka noocaas ah ee daawada xoolaha, kuwaas oo qori doona daaweynta ugu waxtar leh, iyo sidoo kale daaweynta guriga.
Sauerkraut leh beetroot - qurxinta miiska ee maalmaha iyo maalmaha fasaxyada
Tilmaanta iyo sifooyinka wanaagsan ee yamaariga
Magacyada dhirta iyo noloshooda
Xilliga jiilaalka, jidhku wuxuu ku yar yahay fiitamiinada, iyo si uu u buuxiyo sahaydooda, waxaan ku faraxsanahay in aan furi karno xagaaga: caano, juus ah, jajab, xajin, jellies. Dhanka kale, macaanka 20% ee qaddarka bilawga ah ee fitamiin C ayaa sii ahaan doona, halka diyaarinta miro kulul la yareeyo kulaylka iyo ilaalinta fitamiinada si ka fiican, ka sokow, kuleylka wakhtiga gaaban waxaa loola jeedaa in laga saaro hawada sheyga iyo burburinta habka enzim ee oksidiyamka fitamiinada. Read More